မကောငျးမှနျးသိလဲ ပေါငျးပါတယျ . . . သူ့လို အပျေါယံပဲပေါ့ – Shinyoon
မကောငျးမှနျးသိလဲ ပေါငျးပါတယျ . . . သူ့လို အပျေါယံပဲပေါ့
ဒီလူမကောငျးလို့ မပေါငျးဘူးဆိုတာမြိုးလုပျရငျ ကြှနျမ ဆကျဆံရေးသိပျညံ့သှားမှာပေါ့ ကောငျးသညျ ဖွဈစေ မကောငျးဘူးဖွဈစေ ကြှနျမ ပေါငျးတယျ ကြှနျမအပျေါကောငျးတဲ့လူကိုတော့ စိတျနှဈကိုယျနှဈပွီးတော့ ပေါငျးတယျသူကောငျးသလို ကိုယျလဲ ပွနျကောငျးနိုငျဖို့ကွိုးစားတယျ အတတျနိုငျဆုံးရိုးသားတယျ ပွီးတော့ ပေါငျးသငျးဆကျဆံရေးကို ရရှေညျတညျတံ့ဖို့ ယုံကွညျမှုတညျဆောကျတယျ
ကိုယျ့အပျေါမကောငျးတဲ့လူကတြော့ သူက အပျေါယံဆိုရငျ ကိုယျဘကျကလဲ အပျေါယံပဲ သူ့ဘကျက ပွုံးပွတဲ့အခါ ကိုယျ့ဘကျက ပွနျပွုံးပွဖို့လဲ ဝနျမလေးဘူး စိတျထဲမှာတော့ တိတျတိတျလေး blacklist ထညျ့ထားတယျအလိမျအညာမှနျးသိလဲ မသိသလိုပဲ နားထောငျပေးတယျ တဈဖကျက အပငျပနျးခံပွီး လိမျနညောနရေတာကို ကြှနျမက သှားပွီးရီလိုကျရငျ တဈဖကျလူကို အားနာစရာတှေ ဖွဈကုနျမှာလဘောမှမသိသလိုပဲ ငွိမျငွိမျလေးနားထောငျတယျ လိမျနမှေနျးသိနတောပဲ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ဆငျခွငျလို့ရတာပဲလေ
ဒီလိုပါပဲ ကြှနျမတို့ ပတျဝနျးကငျြမှာ တဈရာမှာတဈယောကျ စိတျရငျးနဲ့ ပေါငျးတတျတဲ့ မိတျဆှဆေိုတာတဖွေးဖွေးနဲ့ ရှားလာခဲ့တယျ အဲ့ဒီကွားထဲမှာမှ ဒီလူက မကောငျးဘူး မပေါငျးဘူးဆိုတာမြိုးသှားလုပျရငျတဈယောကျတညျး အထီးကနျြပွီး ပငျြးစရာကောငျးနလေိမျ့မယျ
ဒါကွောငျ့ မကောငျးမှနျးသိပမေယျ့လဲ ပေါငျး . . .
ကိုယျပေါငျး စိတျခှါနညျးနဲ့ဖွဈဖွဈ ရလေိုကျငါးလိုကျလေးပဲ ဖွဈဖွဈ ပေါငျးပေါ့ သူက အပျေါယံဆိုရငျ ကိုယျလဲ အပျေါယံလေးပဲ ပေါငျးပေါ့ အဲ့လိုမြိုးမှ မဟုတျရငျ ပေါငျးသငျးဆကျဆံရေး သိပျညံ့သှားလိမျ့မယျ ။
ဒီလူမကောင်းလို့ မပေါင်းဘူးဆိုတာမျိုးလုပ်ရင် ကျွန်မ ဆက်ဆံရေးသိပ်ညံ့သွားမှာပေါ့ ကောင်းသည် ဖြစ်စေ မကောင်းဘူးဖြစ်စေ ကျွန်မ ပေါင်းတယ် ကျွန်မအပေါ်ကောင်းတဲ့လူကိုတော့ စိတ်နှစ်ကိုယ်နှစ်ပြီးတော့ ပေါင်းတယ်သူကောင်းသလို ကိုယ်လဲ ပြန်ကောင်းနိုင်ဖို့​ကြိုးစားတယ် အတတ်နိုင်ဆုံးရိုးသားတယ် ပြီးတော့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကို ရေရှည်တည်တံ့ဖို့ ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်တယ်
ကိုယ့်အပေါ်မကောင်းတဲ့လူကျတော့ သူက အပေါ်ယံဆိုရင် ကိုယ်ဘက်ကလဲ အပေါ်ယံပဲ သူ့ဘက်က ပြုံးပြတဲ့အခါ ကိုယ့်ဘက်က ပြန်ပြုံးပြဖို့လဲ ၀န်မလေးဘူး စိတ်ထဲမှာတော့ တိတ်တိတ်လေး blacklist ထည့်ထားတယ်အလိမ်အညာမှန်းသိလဲ မသိသလိုပဲ နားထောင်ပေးတယ် တစ်ဖက်က အပင်ပန်းခံပြီး လိမ်နေညာနေရတာကို ကျွန်မက သွားပြီးရီလိုက်ရင် တစ်ဖက်လူကို အားနာစရာတွေ ဖြစ်ကုန်မှာလေဘာမှမသိသလိုပဲ ငြိမ်ငြိမ်လေးနားထောင်တယ် လိမ်နေမှန်းသိနေတာပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဆင်ခြင်လို့ရတာပဲလေ
ဒီလိုပါပဲ ကျွန်မတို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တစ်ရာမှာတစ်ယောက် စိတ်ရင်းနဲ့ ပေါင်းတတ်တဲ့ မိတ်ဆွေဆိုတာတဖြေးဖြေးနဲ့ ရှားလာခဲ့တယ် အဲ့ဒီကြားထဲမှာမှ ဒီလူက မကောင်းဘူး မပေါင်းဘူးဆိုတာမျိုးသွားလုပ်ရင်တစ်ယောက်တည်း အထီးကျန်ပြီး ပျင်းစရာကောင်းနေလိမ့်မယ်
ဒါကြောင့် မကောင်းမှန်းသိပေမယ့်လဲ ပေါင်း . . .
ကိုယ်ပေါင်း စိတ်ခွါနည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ် ရေလိုက်ငါးလိုက်လေးပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပေါင်းပေါ့ သူက အပေါ်ယံဆိုရင် ကိုယ်လဲ အပေါ်ယံလေးပဲ ပေါင်းပေါ့ အဲ့လိုမျိုးမှ မဟုတ်ရင် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး သိပ်ညံ့သွားလိမ့်မယ် ။
ခဈြလကျြနဲ့ ဘာလို့လမျးခှဲခဲ့တာလဲ တဲ့